amidy amin'ny lafo indrindra - BusinessFinder.Me
amidy amin'ny lafo indrindra
Orinasa outsourcing shisha mandeha tsara amidy any UAE Dubai
Orinasa shisha outsourcing tsara orina amidy. Niorina tamin'ny taona 2019. lisansa Mainland LLC. Ao amin'ny hotely sy trano fisakafoanana. Con...
Fivarotana kafe mihazakazaka amidy any Dubai
Fivarotana kafe miavaka no amidy. Fampiasam-bola lehibe efa ho 15% isan-taona. Ny ekipa dia tombony lehibe sy tombony azo saika 35000 AED isam-bolana. Ny p ...
Daty sy kafe mpivarotra orinasa amidy any Dubai
Orinasa mpivarotra daty sy kafe malaza fanta-daza mitady fanitarana amin'ny fivarotana izany fizarana izany. Miditra amin'ny tsenan'i Uae izahay izay manana laza tsara hatramin'ny 2008. Izahay a ...
Mihazakazaka amidy raharaham-barotra amin'ny fisotroana rano fisotro mahasoa any Dubai
Orinasa famatsian-drano fisotro mahasoa amidy maika. Orinasa mahomby be. Antony fivarotana: mandeha any an-tanindrazana ny tompony. Antsipiriany bebe kokoa fiangaviana ...
Mihazakazaka fivarotana Scrap amidy any Dubai
Mitady mpiara-miasa hitantana tokotanin-tseranana any Dubai Toerana Umm Ramool tokotany 15,000 toradroa vavahady lehibe amin'ny làlana lehibe Direct from tompony Mifandraisa aminay
Cafeteria amidy any Dubai
Orinasa manao fifanarahana amidy any Dubai
Orinasa mpanao fifanarahana efa za-draharaha 30 taona miaraka amina mpanao hosodoko mahay miisa 14 amidy eo no ho eo. Mifandraisa aminay
Trano fisakafoanana sinoa amidy any Dubai
Trano fisakafoanana miorina tsara iray ao JLT izay nahavita 7 taona nahomby tamin'ny alàlan'ny faneken'ny Kaominina sy ny DMCC rehetra. Manao annua ...
Manome salon ho an'ny fampanofana any Dubai Marina
Vonona ny handray salon ho an'ny fampanofana any Dubai Marina. Azo atao ny mandoa isam-bolana. Seza 6. Watsapp ihany
Salon tsara tarehy tsara amidy any UAE
Running Ladies Salon amidy any Oud Metha Dubai; Fivarotana ny vidiny 90,000 AED; Rihana ambany; Fahazoan-dàlana hatramin'ny feb 2022; Mpiasa 2 miasa; Andininy: Chai 2 ...
Cafeteria amidy / Fandraisana seza habaka - 40 isam-potoana Validiny: Feb 2022 Hofan-trano: 50K (Hatao fifampiraharahana mivantana amin'ny tompon-trano) RTA Occupied Spac ...
Fivarotana trondro amidy any Dubai
FIVAROTANA FIVAROTANA AM-TRANO TRANO SY TRANO HIFIDY Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny